गर्मीमा खुट्टा गन्हाउँछ ? यसो गर्नुहोस् | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
गर्मीमा खुट्टा गन्हाउने समस्या धेरैको हुन्छ । यसलाई थुप्रै तरिकाले उपचार गर्दा पनि गन्ध नहट्ने हुन्दा यो धेरैको लागि समस्या हुने गर्दछ । खुट्टाको दुर्गन्धले तपाईंलाई जहाँ पायो त्यहि असहज महसुस हुन्छ ।
कसरी आउँछ गन्ध ?
हाम्रो खुट्टमा पसिनाको धेरै ग्रन्थी हुने गर्दछ जसले ब्याक्टेरियासँग मिलेर दुर्गन्ध बढाउने काम गर्दछ ।
खुट्टा र जुत्ताबाट दुर्र्गन्धलाई टाढा राख्नका लागि केहि घरेलु तरिका छन् । आउनुहोस्, थाहा पाऔँ ।
औषधीय र सुगन्धित पाउडर प्रयोग गर्नुहोस्ः
खुट्टाको दुर्गन्ध हटाउनका लागि राम्रो औषधीय पाउडरको प्रयोग गर्नुहोस् । मेडिकल स्टोरमा एन्टी फंगल र एन्टी सेप्टिक बडी पाउडर पाइन्छ । तपाईं यस्तो प्रकारको पाउडर लगाउनुहोस् । यसलाई राती सुत्नुभन्दा अगाडि र बाहिर जानुभन्दा पहिले यसलाई जुत्तामा छर्किनुहोस् ।
खुट्टालाई गन्धरहित बनाउनका लागि सबैभन्दा ठूलो उपाय भनेको सफा गर्नु नै हो । अफिसबाट आइसकेपछि र सुत्नुभन्दा पहिले खुट्टा धुनुभयो । यसो गर्दा ब्याक्टेरिया धेरैबेर सम्म रहँदैन र खुट्टाबाट दुर्गन्ध हट्छ ।
सुतीको मोजा लगाउनुहोस्ः
सुतीको मोजाले खुट्टामा हावाको संचार राम्रो हुने भएकाले यसले पसिनालाई पनि सुकाउने गर्दछ । दोस्रो, सुतीको मोजाले पसिनालाई सोस्ने गर्दछ र खुट्टामा दुर्गन्ध पैदा गर्ने ब्याक्टेरियाको वृद्धिलाई रोक्ने गर्दछ । खुट्टा र जुत्ताको दुर्गन्ध हटाउने यो सबैभन्दा राम्रो तरिका हो ।
आफ्नो जुत्ता सफा राख्नुहोस्ः
तपाईं आफ्नो जुत्ता धुनुहोस् र यसलाई घाममा सुकाउनुहोस । यसो गर्नाले दुर्गन्ध पैदा गर्ने ब्याक्टेरिया नष्ट हुने गर्दछ । सूर्यको प्रकाशमा पाइने स्टलाइजेशनको प्रभावले फंगल र ब्याक्टेरिया नाश हुने गर्दछ ।
छालाको जुत्ता नलगाउनुहोस्ः
छालाको जुत्तामा हावा पास हुनबाटबञ्चित हुने गर्दछ जसले पसिना निस्कने गर्दछ । गर्मी महिनामा यस्तो जुत्ताको प्रयोग गर्नुहोस् जसमा हावा पास हुन सकोस् । दुर्गन्ध हटाउनको लागि र ब्याक्टेरिया र पसिना भगाउनको लागि यो निकै अत्यावश्यक छ ।
यसले पनि ब्याक्टेरिया मार्न र पसिनालाई रोक्ने गर्दछ । आधा बाल्टी पानीमा १ चम्चा बेकिङ सोडा हाल्नुहोस् । यसमा आफ्नो खुट्टा राखेर २० मिनेटसम्म राख्नुहोस् । यो प्रक्रिया हप्तामा कम्तीमा पनि दुईपटक गर्नुहोस् । मोजा लगाउनुभन्दा पहिले बेकिङ सोडा छर्कन सक्नुहुन्छ ।
यसले खुट्टामा लुकेको ब्याक्टेरियालाई पनि नष्ट गरिदिने गर्दछ । यसले विषालु पदार्थलाई हटाउनमा सहयोग गर्दछ । मनतातो पानीमा दुईचम्चा नुन हाल्नुहोस् र यसमा आफ्नो खुट्टालाई १५ मिनेटसम्म भिजाउनुहोस् । तपाईं यसलाई जुत्तामा पनि छर्कनसक्नुहुन्छ ।
यसमा टोनिक एसिडको मात्रा धेरै हुने भएकाले साना साना प्वालहरुलाई बन्द गरिदिने गर्दछ जसका कारण पसिना निस्कन बन्द हुन्छ । कडा कालो चिया बनाएर एक बाल्टी पानीमा हाल्नुहोस् र १ चम्चा नुन पनि मिसाउनुहोस् । यो मिश्रणमा कम्तीमा पनि आफ्नो खुट्टलाई एक घण्टा डुबाउनुहोस् ।
यो एक प्रकारको एसिड हो जसले ब्याक्टेरिया बढाउन रोक्दछ । यसले पसिनाको दुर्गन्धलाई रोक्न गर्दछ । एक कप भेनेगरलाई आधा बाल्टी मनतातो पानीमा हाल्नुहोस् र यसमा खुट्टालाई १५ मिनेट राख्नुहोस् । दुईहप्तासम्म सुत्नुभन्दा अगाडि दैनिक अपनाउनुहोस् ।
अदुवालाई पानीमा आधा घण्टासम्म उमाल्नुहोस् । आधा बाल्टी पानीमा यो मिश्रण घोल्नुहोस् । यो पानीमा आफ्नो खुट्टामा आधा घण्टासम्म डुबाउनुहोस् ।
बैशाख २८ गते, २०७२ - १८:५५ मा प्रकाशित